स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस” दशैंमा लकडाउन हुने पक्का ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस” दशैंमा लकडाउन हुने पक्का !
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस” दशैंमा लकडाउन हुने पक्का !
काठमाडौं, ८ असोज । कोरोना संक्रमणको दर लगातार बढे फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समिरकुमार अधिकारीले न्यूज २४ लाई जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’को बैठकले २५ हजार बढी भए सक्रिय संक्रमित भए बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । २५ हजार बढी संक्रमित भए अस्पतालको पूर्वाधारमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने पनि सह प्रवक्ता अधिकारीले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ४ सय १४ छ । यहि दरमा संक्रमित बढ्दै गएमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार हुन धेरै समय लाग्दैन ।